Hungarosauna Inoyerera Spa - Dhizaini magazini
Inoyerera Spa Chinhu chakakosha chekudyara kuronga, kusimudzira uye kuwedzera basa. Kuchinjira kumamiriro ehupfumi asingatarisirwi. Izvi ndozvazvakaitawo nezvemagadzirirwo enziyo uye zvivakwa zvezvivakwa. Iyo yekurapa mvura yekunyorova kamuri, iyo inogona kuisa spa mvura uye yekushambira dziva rekushambira pane nyanza inopa humwe hunyanzvi hwesauna, iyo inogona kungova pano muHungarosauna. Ichi chivakwa chine muchinjiro-wakasungirirwa wekuvharidzira danda nehuremu hwehuni. Nenzira isina tsarukano, chifananidzo chakafanana nehuni chakafukidzwa mukati nekunze paine matanda masango sedanda remuti.
Zita rechirongwa : Hungarosauna, Vagadziri zita : Gyula Takacs, Izita remutengi : Gyula Takács.
Inoyerera Spa Gyula Takacs Hungarosauna